Baarlamaanka Soomaaliya oo amaanya USC IYO SNM | allsanaag
Baarlamaanka Soomaaliya oo amaanya USC IYO SNM
““Waa nasib daro in anagoo marti naloo yahay sharciga iyo dasturka aan ilaalino kuwi martida noo ahana ay qoriga istacmalan”. sidaa horay waxa u yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur, isaga oo la hadlaya madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Farmaajo
Hadaba muxuu maanta ka yiri Cabadishakuur, Allah ha u naxariistee Maxamed Siyaad Bare oo dhintay Rubuc qarni ka hor
Ha la yaabin inta madaxtooyada Soomaaliya la weeraro, in loo hurdo tago qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, sababtoo ah Xildhibaankii, Weriyihii, ganacsatadii, wasiiradii ka soo jeeday Beesha Hawiye dagaal waxay ugu jiraan inaan Qaran Soomaaliyeed la helin . Sida lagu gaari karaana in qaran Soomaaliyeed la helina ay tahay mucaarad , warxumo tashiil iyo Qori is maris oo inta amni xumo laga shaqeeyo hadhowna la yiraahdo sidee wax u dhaceen iyo maxaa wixii dhacay wax looga qaban waayey. Qiiro jabaanka iyo qori is mariska siyasiyiinta Hawiye Action Group, waxay ku dhamaan kartaa oo qura waa caasimadda Soomaaliya oo Muqdisho laga qaado.
Muwaadin Soomaaliyeed oo u jawaabaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur
Slået op af Yahya Yussuf i 12. maj 2018
← Farmaajo oo Xaafadda Waaberi lagu soo dhoweeyey Feyte oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka Madaxweynaha Puntland →